2018 ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှအသက် -
2018 ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှအသက်
Home/ 2018 ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှအသက်
အင်္ဂလန်၊ ဂျာမနီ နဲ့ နိုက်ဂျီးရီးယား အသင်းတွေကတော့ အသက်အငယ်ဆုံးအသင်းတွေအဖြစ် ရပ်တည်လျှက်ရှိနေ
2018 ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ခြေစစ်ပွဲအောင်တဲ့အသင်း ၃၂ သင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ CIES Football Observatory ကတော့ အဲဒီအသင်းတွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို သုတေသနပြုစုခဲ့ပြီး၊ အဲဒီထဲကမှ ခြေစစ်ပွဲအောင်အသင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းတွေကို Sports Myanmar ပရိသတ်တွေအတွက် စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသက်အငယ်ဆုံး အသင်းအဖြစ် နိုက်ဂျီးယားအသင်းက ရပ်တည်ခဲ့ပြီး၊ ပျမ်းမျှအသက်အကြီးဆုံး ခြေစစ်ပွဲအောင်အသင်းအဖြစ် ပနားမားအသင်းက ရတည်လျှက်ရှိနေပါတယ်။
ခြေစစ်ပွဲအောင် အသင်းတွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းများ –
1. ပနားမား (29.4)
2. အက်စလန် (29)
3. ကော်စတာရီကာ (29)
4. ဥရုဂွေး (28.7)
5. ဆော်ဒီအာရေဗျ (28.7)
6. အာဂျင်တီးနား (28.4)
7. ရှရှား (28.1)
8. စပိန် (28)
9. ပိုလန် (28)
10. ဘရာဇီး (27.
11. ပေါ်တူဂီ (27.7)
12. ဆားဘီးယား (27.7)
13. ဂျပန် (27.5)
14. ခရိုရေးရှား (27.5)
15. ဆွီဒင် (27.4)
16. မက္ကဆီကို (27.4)
17. ကိုလံဘီယာ (27.3)
18. မော်ရိုကို (27.2)
19. ပီရူး (27)
20. ဘယ်လ်ဂျီယံ (27)
21 အီဂျစ် (27)
22. သြစတေးလျ (26.9)
23. တူနီးရှား (26)
24. ဆွစ်ဇာလန် (26.6)
25. တောင်ကိုရီးယား (26.5)
26. အီရန် (26.5)
27. ပြင်သစ် (26.4)
28. ဆီနီဂေါ (26.4)
29. ဒိန်းမတ် (26.1)
30. အင်္ဂလန် (25.9)
31. ဂျာမဏီ (25.7)
32. နိုက်ဂျီးရီးယား (24.9)
ဒေသဆိုင်ရာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အလိုက် ပျမ်းမျှသက်တမ်းများ –
CONCACAF – 28.6
CONMEBOL – 27.8
AFC – 27.2
UEFA – 27.2
CAF – 26.5
2018 ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့တဲ့ အသငျးတှရေဲ့ ပမျြးမြှအသကျ
အင်ျဂလနျ၊ ဂြာမနီ နဲ့ နိုကျဂြီးရီးယား အသငျးတှကေတော့ အသကျအငယျဆုံးအသငျးတှအေဖွဈ ရပျတညျလြှကျရှိနေ
2018 ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအတှကျ ခွစေဈပှဲစဉျတှေ ပွီးဆုံးခဲ့ပွီဖွဈပွီး ခွစေဈပှဲအောငျတဲ့အသငျး ၃၂ သငျး ထှကျပျေါလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ CIES Football Observatory ကတော့ အဲဒီအသငျးတှရေဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို သုတသေနပွုစုခဲ့ပွီး၊ အဲဒီထဲကမှ ခွစေဈပှဲအောငျအသငျးတှရေဲ့ ပမျြးမြှသကျတမျးတှကေို Sports Myanmar ပရိသတျတှအေတှကျ စုစညျးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
အသကျအငယျဆုံး အသငျးအဖွဈ နိုကျဂြီးယားအသငျးက ရပျတညျခဲ့ပွီး၊ ပမျြးမြှအသကျအကွီးဆုံး ခွစေဈပှဲအောငျအသငျးအဖွဈ ပနားမားအသငျးက ရတညျလြှကျရှိနပေါတယျ။
ခွစေဈပှဲအောငျ အသငျးတှရေဲ့ ပမျြးမြှသကျတမျးမြား –
2. အကျစလနျ (29)
3. ကျောစတာရီကာ (29)
4. ဥရုဂှေး (28.7)
5. ဆျောဒီအာရဗြေ (28.7)
6. အာဂငျြတီးနား (28.4)
7. ရှရှား (28.1)
8. စပိနျ (28)
9. ပိုလနျ (28)
10. ဘရာဇီး (27.?
11. ပျေါတူဂီ (27.7)
13. ဂပြနျ (27.5)
14. ခရိုရေးရှား (27.5)
15. ဆှီဒငျ (27.4)
16. မက်ကဆီကို (27.4)
18. မျောရိုကို (27.2)
20. ဘယျလျဂြီယံ (27)
21 အီဂဈြ (27)
22. သွစတေးလြ (26.9)
23. တူနီးရှား (26.?
24. ဆှဈဇာလနျ (26.6)
25. တောငျကိုရီးယား (26.5)
26. အီရနျ (26.5)
27. ပွငျသဈ (26.4)
28. ဆီနီဂေါ (26.4)
29. ဒိနျးမတျ (26.1)
30. အင်ျဂလနျ (25.9)
31. ဂြာမဏီ (25.7)
32. နိုကျဂြီးရီးယား (24.9)
ဒသေဆိုငျရာ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျအလိုကျ ပမျြးမြှသကျတမျးမြား –